भारतीय इन्ट्रेस्ट विपरीत भैरहवा अन्तिम चरणमा, के निजगढ बन्ला त ? — News of The World
भारतीय इन्ट्रेस्ट विपरीत भैरहवा अन्तिम चरणमा, के निजगढ बन्ला त ?
२ बैशाख, काठमाडौ । परोक्ष वा प्रत्यक्ष भारतीय अड्चनका बाबजुद गौतमवुद्ध क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । भारतीय संस्थापनको गोरखपुर आसपासमा ठुला विमानस्थल बन्न नदिने अदृश्य निति उक्त विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएसँगै असफल हुने पक्का भएको छ ।
भारतीय वायु सेनाको महत्वपुर्ण ‘एयर वेस’ रहेको गोरखपुर बाट गौतमवुद्ध विमानस्थल भैरहवा जम्मा १३८ किमी टाढा रहेको छ । भारतीय सीमानामा चिनिया कम्पनीले निर्माण गरीरहेको उक्त विमानस्थल प्रति लामो समयदेखिनै भारतीय पक्ष असन्तुष्ट रहदै आएको थियो । आफ्नो महत्वपुर्ण ‘एयर वेस’ मा ट्राफिक समस्या श्रृजना हुन सक्ने भन्दै भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहदा पनि नेपाल सरकारले वुद्ध जन्मस्थल लुम्बीनीको पर्यटकिय प्रवर्धनका लागि विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडी बढाएको थियो ।
उक्त विमानस्थलको चार लेयरको पीच मध्ये अन्तीम पीच निर्माण भइरहेको छ । धावनमार्गको पीच अन्तीम चरणमा पुगेकोले आगामी पर्यटकिय सीजन सम्म उक्त विमानस्थलबाट अन्राष्ट्रिय उडान हुन सक्ने बताइएको छ ।
विमानस्थल सन्चालनमा आएपछि वोइङ्ग ७५७ र एयरवस ३३० जस्ता ठुला हवाइजहाज ल्यान्डीङ गर्न सक्ने उक्त विमानस्थलको लागत भने ६ अर्ब २२ करोड ५२ लाख रुपियाँ रहनेछ ।
निजगढ बन्न नदिने भारतीय दाउ
भारतीय इन्ट्रेस्ट विपरीत भैरहवा विमानस्थल बनेको छ । भारतीय संस्थापन अर्को अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आफ्नो सीमा नजिक नबनोस भन्ने चाहान्छ । यसैको परीणाम हो निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सुरु गरीएका विभिन्न बखेडा । भारतको कन्या कुमारी देखि काश्मीर सम्म सैन्य उडान भर्ने गोरखपुर ‘एयर वेस’ मा हवाइ ट्राफिक उत्पन्न हुने र अन्तराष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सीले आफ्नो सैन्य शक्ती माथि गुप्त निगरानी गर्न सक्ने भन्दै भारतीय संस्थापन नेपालको दक्षीणी सीमा आसपासमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनुन भन्ने चाहान्छ ।
नेपालको तराइको पहिचानलाई अन्तराष्ट्रिय कनेक्टीभीटी नहोस भन्ने भारतको पुरानै चाहाना हो । तराईलाई उल्झनमा राख्न सके तराई कार्ड मार्फत नेपाल माथि सधै दबाब राख्न सकिने पुरानै सोचमा भारतीय संस्थापन लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
तराई क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कनेक्टीभीटी बढ्ने भएकोले भारत नेपालको दक्षीणी क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनोस भन्ने चाहान्छ । यसैको परीणाम हो निजगढ माथि भइरहेको नकारात्मक प्रचार पनि ।
नेपाल काठमाडौमै खुम्चीयोस
भारतले बाहिर नबोले पनि उसको रणनिति नेपाल काठमाडौमै खुम्चीयोस भन्ने छ । काठमाडौ बाहिर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा हवाइ उड्डयनको विकेन्द्रीकरण हुने र ती ठाउँको आर्थिक विकास समान रुपमा हुने हुदाँ असमानता घट्ने पक्का छ ।
त्यसैले भारत पोखरामा पनि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने सोचमा रहिरहेको छ । यसमा सहायक बनिरहेका छन । भारतीय प्रभावमा काम गर्ने कर्मचारी, नेता र ठेकेदार पनि ।
भाषण गर्दा गर्दै नेतामाथि झापड बर्सियो (भिडियो सहित)
बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधि उत्साहित